Hagaha qeexan ee ugu fiican iOS 13 tabaha - Qeybta III | Wararka IPhone
Waxaan ku sii wadaynaa hagayaasha xagaaga si aan u diyaarinno macruufka 13 iyo imaatinkiisa bartamaha Sebtember. Tani mar horeba waa qaybtii saddexaad ee hagayaasheena saxda ah ee kuu oggolaanaya inaad ka dhigto inta ugu badan ee waxqabadkaaga iPhone mahadnaqidda talada aan ku siin doonno. Iyo, sida badanaa dhacda, siidayn kasta oo macruufka ah waxaa ku jira faahfaahin badan oo yar yar oo aan lagu magacaabin soo bandhigida sababo muuqda awgood. Waxaan ku tusineynaa waxa ugu fiican ee tabaha iyo functionalities laga yaabaa in aadan aqoon ee ku saabsan macruufka 13 iyo in kuu ogolaanayaa inaad u tuujin aad iPhone, nala soo socodsii iyaga.
Waxa ugu horeeya ee aan halkan kaaga tagayo ayaa ah labadii qaybood ee hore ee hagahan, iyo in mid kasta oo iyaga ka mid ahi uu haysto tiro wanaagsan oo faahfaahin ah oo ay tahay inaadan ka maqnaan:
Hagaha saxda ah ee ugu fiican iOS 13 tabaha - Qaybta I
Hagaha saxda ah ee ugu fiican iOS 13 tabaha - Qaybta II
Haddii aad horey u aqrisay, Waxaa la joogaa waqtigii la geli lahaa tilmaamahan saddexaad iyada oo la adeegsanayo waxyaabo badan oo aadan weli ogayn. Si kastaba ha noqotee, waxaan fursadda uga faa'iideysaneynaa inaan ku xusuusino in kanaalkayaga Youtube aan ku haysanno tiro casharro ah oo aad ku arki karto habka ugu madadaalada badan uguna fudud (LINK).
1 Sida laysugu xidho laba headphones oo Bluetooth ah isla mar
2 U qoro xusuusiyeyaal badan Siri hal mar
3 Ka jooji wicitaanada nambarada aan lagaranayn
4 Waqtiga Khariidadaha Apple wuxuu leeyahay «Wadada Muuqaalka»
Sida laysugu xidho laba headphones oo Bluetooth ah isla mar
Suurtagalnimada isku xirnaanta dhowr sameecado oo Bluetooth ah isla waqti isku mid ah ayaa horeyba u jirtay in muddo ah tiro wanaagsan oo qalabka Android ah, Si kastaba ha noqotee, maahan illaa imaatinka iOS 13 in iPhone loo oggolaaday inuu ku sii daayo codka laba sameecadood oo Bluetooth ah isla waqtigaas. Sidii la filaayay, shaqadan waxaa lagu xadiday aaladaha shirkada Cupertino (hada) sida Beats iyo AirPods, sikastaba, uma sahlanaanin labada isticmaale inay ku raaxeystaan ​​isla muusig hal iPhone ah oo sii daaya.
Si looga dhigo inay shaqeyso way fududahay, haddii aan leenahay isticmaale iska leh AirPodyada kale ee nidaamka Qoyskeena ama lagu daro xiriirada, markaan gujino Xarunta Xakamaynta> AirPlay, AirPodskeena iyo kuwa saaxiibkeen ama xubin qoyskeena waa inay ahaadaan isla waqtigaas. Tani sidoo kale way dhacdaa dabcan marka AirPod-yada kale annagaa leh. Haddii sameecadaha dhegaha ee dheeraadka ah ee aad rabto inaad ku xirmaan aysan ka muuqan AirPlay, si fudud dib ugu bilow oo ku xiriir iyaga oo u maraya qaababka Bluetooth-gaaga iPhone-ka. Laga bilaabo xilligaas waxaad u habeyn kartaa mugga iyo dib u ciyaarista shaqsi ahaan labada lamaane ee sameecadaha dhagaha ee Bluetooth Xitaa haddii ay tahay oo keliya iPhone-ka codka sii deynaya, tusaale ahaan codsi muusig ama iPad ah oo aad filim ku daawaneyso. Hawl fudud oo habboon.
U qoro xusuusiyeyaal badan Siri hal mar
Mid ka mid ah howlaha xiddiga ee Siri waa si sax ah in loo qoro xusuusinta, ugu yaraan waa shaqeynta aan isticmaalo inta badan, maadaama awoodaha kale badankood aysan aheyn inay si madaxbanaan u madax banaan tahay. Dhibaatadu waxay ahayd illaa iyo hadda markaan abuurnay xusuusinno haddii aan dhammaantood u wada magacdarnay, Siri wuxuu noo sameeyay hal xusuusin taas oo uu ku taxay liistadooda.
Hadda macruufka 13 Siri wuxuu noo oggolaan doonaa inaan abuurno liis xusuusiyayaal kala duwan, gooni ah iyo shaqsiyadeed iyada oo loo marayo isla amar. Si tan loo sameeyo waxaan si fudud u dhihi karnaa "... iyo" inta u dhexeysa xusuusin iyo xusuusin, tusaale ahaan: Siri, sameyso xusuusin berri 10: 00 loogu yeero "la kulanka maamulaha, iyo 11:00" dukaamaysi tag. Aragti ahaan, taasi waa sida ugu fudud ee aan awood ugu yeelan doonno inaan abuuri karno taxane xusuusin shaqsiyeed ah oo loo maro Siri si deg deg ah oo fudud. Xaqiiqdu waxay tahay in illaa hadda awooddani ay wax ku ool u tahay Ingiriisiga laakiin aan aad ugu badnayn Isbaanishka.
Ka jooji wicitaanada nambarada aan lagaranayn
Hakad dambe oo hurdo la'aan ah wicitaanada xayeysiinta iyo dhamaan waxyaabaha aan micnaha lahayn ee waqtiga luminaya oo inaga dhigaya waqtiga ugu haboon. IOS 13 hadda waxaa ku jira suurtagalnimada in la aamusiyo dhammaan wicitaanada aan ka helno lambarrada aan la aqoon, iyada oo aan laga reebin, mid kasta oo ka mid ah wicitaannada aan helno waxay si toos ah u aadayaan sanduuqa boostada codkeenna haddii aan firfircoonaanno, ama waxay si otomaatig ah u laalaadi doonaan iyadoon taleefankayaga iPhone uusan soo garaacin .
Si kastaba ha ahaatee, Shaqadani sidoo kale waxay leedahay dhinac xun, taasna waa inay aamusinayso dhammaan wicitaannada ka yimaada xiriirada aynaan ku darin buugga taleefanka, Tanina runti waxay noqon kartaa mid aad u ba'an maxaa yeelay waxaan waayi karnaa wicitaannada macaamiisha aannaan lahayn xiriiriyeyaal, isbitaalka ama hay'ad dadweyne oo u baahan inay nala soo xiriirto. Noqo sida ay doonto ha noqotee, way cadahay inay tahay waxqabad in la dhammaystiro iyo in aan lagu talin karin in had iyo jeer lagu kiciyo si aan caadi ahayn, laakiin waxay ku imaan kartaa waxtar badan kiisaska aan u baahanahay feejignaan dheeri ah mana awoodno awood u yeelashada joojinta, inkasta oo taasi ay tahay waxa aan Rabshaddu hakin, sax?
Waqtiga Khariidadaha Apple wuxuu leeyahay «Wadada Muuqaalka»
Khariidadaha Apple ayaa had iyo jeer ka dambeeya Khariidadaha Google, tani waa lama huraan waana in Google-ka weyn ee maamuli kara tiro macluumaad ah oo ka muhiimsan kana waxtar badan kan Apple. Si kastaba ha noqotee, shirkadda Cupertino ayaa sidoo kale dadaalkeeda gelineysa sidii khariidadeeda iyo nidaamka hagistu ay si fiican u shaqeyn lahaayeen, Marka hadda waxay ku kordhiyeen waxqabad macno u sameynaya xaqiiqda ah in dhawaanahan aan aragnay gawaari badan oo Khariidado Apple ah oo dhex wareegaya waddooyinkeenna adduunka.
Apple waxay ku dartay "Muuqaalka Wadada" khariidadaha Apple, Awooddani waxay noo ogolaaneysaa inaan ku dul marno isla waqtigaas khariidada 2D waxayna na tusaysaa muuqaalka hore ee jidadka. Marka la eego tayada muuqaalka, maareynta macluumaadka iyo socodka, xaqiiqda ayaa ah in Apple uu aaday dhanka midig ee Muuqaalka Wadada Google, si kastaba ha noqotee, hadda waxaa kaliya laga shaqeysiiyay San Francisco inkasta oo la filayo in bilaha soo socda ay ku soo kordho Waddo Tirada magaalooyinka iyo jidadka laga heli karo nidaamkan ayaa ah mid layaableh, taas oo ah tillaabada ugu horreysa ka hor inta aanad dhex dhexaadin Xaqiiqada Dareenka.
Waad ogtahay, haddii aad rabto inaad noo sheegto xeelado dheeri ah ama aad shaki ka qabtid, ha ilaawin inaan haysanno sanduuqa faallooyinka oo aan ku xallin karno arrin kasta oo sidaas ku siiya macluumaad dheeri ah bulshada News News markasta oo aad rabto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Tilmaam qeexan oo leh xeeladaha ugu fiican ee iOS 13 - Qaybta III